I-Black Rhino Game Lodge - Indawo yezilwane duze ne- Sun City
Indawo yezilwane duze ne- Sun City e-Black Rhino Game Lodge
I-Black Rhino Game Lodge isondelene kakhulu nenqwaba yezilwane zasendle - ezivela ezilwaneni eziya emdlalweni kuya ezinambuzaneni. Uma ukuphunyuka okuvela ehlathini kuyadingeka, landela isihlahla esiya embusweni we-Afrika wenjabulo - iSun City.
Lapho ehambela amapulazini aseNingizimu Afrika, omunye ulindele ukubona izingonyama, izindlovu kanye ne-kudu. I-Pilanesberg inakho konke lokhu nokuningi endaweni ephephile eduze ne-Sun City. Thatha umshayeli emzimbeni omsulwa phakathi kwesinye sezindiza zemidlalo ezenzeka phakathi kwePilanesberg National Park noma kwi-Black Rhino Reserve.
Bamba izimoto bese uthatha inhlabathi yase-Afrika ngesitayela sangempela sase-Afrika. .. ngezinyawo. Ithimba leziqondiso eziqeqeshwe ziyatholakala ukuze zihambisane namaqembu abahloli bamazwe ekuhambeni kwemidlalo yemfundo.
I-Sun City inikeza uhlu oluphelele lwezinketho zokuzijabulisa. Abagibeli begreyimu bangabonga imifino yeSifundo seGoli eGoli lapho izingane zabo zijabulela imisebenzi eminingi yamanzi e-Valley of the Waves.
Umdlalo wezemfundo uhamba
Uhambo oluya eSun City